တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ၁.၁၁.၂၀၁၃ မှ စ၍ MPT ၏ ထပ်တိုး ဝန်ဆောင်မှုများ (လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ)
၁.၁၁.၂၀၁၃ မှ စ၍ MPT ၏ ထပ်တိုး ဝန်ဆောင်မှုများ (လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ)
MPT တို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ...... သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒါတွေအားလုံး Free ပေးတဲ့ Service တွေပါ.....:D
Call Waiting,Call Forwarding ဆိုတာ ဘာလဲသိချင်ရင် အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာကြပါကုန် .... :D
Android ဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ Call Setting ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင် Call Waiting ၊ Call Forwarding အစရှိတဲ့ Funcation တွေကိုပါဝင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိ
ဟိုးအရင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီ Service မပေးပါဘူး ၊ အခုကတော့(ဘယ်တုန်းစရလဲသေချာမသိပါ) ပိုက်ဆံပေးရင်လျောက်လို့ရပါပြီ ၊
Call Waiting ဆိုတာကတော့ မိမိဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ထပ်ဖုန်းအ၀င် Call တစ်ခုထပ်လာရင် အသိပေးပါတယ် ၊ အဲဒီအချိန်မှာ လက်ရှိပြောနေတဲ့ဖုန်းကိုမချပစ်ဘဲ .. Hold ကိုနှိပ်ပြီး နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ Call ကိုလက်ခံပြီးစကားပြောလို့ရတဲ့ Service ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Service ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးမှအလွတ်မခံချင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သမားတွေအတွက်တော့တော်တော်ကိုအသုံးဝင်တဲ့Service တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ကမိန်းမဆက်
တာကိုမလွတ်စေချင်ရင်လဲ လုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော် ...
Call Forwarding ဆိုတာကတော့ မိမိဖုန်းကဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာပြင်ပရောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ နောက်ထပ်အခြားနံပါတ်တစ်လုံးကိုအလိုလျောက်လွဲပြောင်းပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိမှာဖုန်းနှစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့ ပထမတစ်လုံးမှာ ဒုတိယတစ်လုံးရဲ့နံပါတ်ကို Call Forwarding Service နဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ် ၊ ပထမတစ်လုံးကို ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဒုတိယ ဖုန်းတစ်လုံးဆီကိုလွဲပြောင်းပြီးအလိုလျောက်ဖုန်းခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Information Technology ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ MPTကတော့ ဒီService တွေရနေတယ်ဆိုတာကို သတင်းထားပြန်ထားတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မတွေရပါဘူး ...
(MPT ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲ .. ပြောချင်သလိုသာပြောတော့ပေါ့နော် :D)
ရတနာပုံတယ်လီပို့စ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရတော့ ဒီ Service ကို5သိန်းတန် 450 ဖုန်းနဲ့ 1500 တန်ဖုန်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာလျောက်လို့ရတယ်လို့တောပြန်လည်ဖြေကြားထားပြီး
လျောက်ထားလိုရင်တော့ ရွှေဂုန်တိုင်ရုံးမှာလျောက်ထားနိုင်ပြီး လျောက်လွှာကြေးဘယ်လောက်မစရမလဲဆိုတာတော့ ရတနာပုံတယ်လီပိုစ် ကိုယ်တိုင်လဲမသိရှာပါဘူး ...
Call Waiting Service ကိုထည့်သွင်းချင်ရင်တော့ လစဉ်ကြေးကို ၅၀၀ ကျပ်
ဖြစ်ပြီး Call Forwarding Service ကိုထည့်သွင်းချင်ရင်တော့ လစဉ်ကြေးကို 10 FEC လစဉ် Bill ထဲကနေဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့နည်းပညာဌာနက မထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကို Android News မှတဆင့် အားအားယားယားရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်
ကဲ .. MPT လို့အကျင့်မယုတ်တတ်ဘူးဆိုရင် Share လိုက်ကြဦးနော်
Ref & Credit : Android News
Posted by အောင်မျိုး at 3:54 AM